Spain - BBC News Somali
Spain oo doobabka reer miyiga ah loo raadinayo dumar ay guursadaan
Ragga iskaabulada ah ee Tuulooyinka lagu soo cidleeyay ayaa dhibaato u mara si ay xaasas u helaan
Ronaldo ayaa oggolaaday inuu bixiyo ganaax lacageed oo gaaraya €18.8m
Dacwad oogeyaasha ayaa 2017-kii sheegay in Ronaldo uu si ula kac ah u sameeyay dmabiga
Shaqaale shaqada looga cayriyay inay seexdeen dhulka garoon ku yaalla Spain
Lix ka tirsan shaqaalaha Ryanair oo sawir laga qaaday iyagoo hurda dhulka garoon diyaaradeed oo ku yaalla Spain ayaa shaqada laga cayriyay, sida ay sheegtay shirkadda diyaaradaha.
Dalalka Mediterranean-ka ku teedsan oo laga codsaday in ay markab dad soo samato bixiyey dekadahooda u furaan
Spain oo aqbashay in markab siday muhaajiiin uu Talyaaniga diiday uu dalkeeda ku soo xirto
Tirada wasiirrada dumarka ah ee Spain oo ka batay ragga
Ra'iisulwasaaraha dalka Spain Pedro Sánchez ayaa 17ka xubnood ee golahiisa wasiirrda 11 ka mid ah ka dhigay dumar, waana tirada ugu badan dalalka qaaradda Yurub oo dhan.
Majaladda National Geographic ayaa soo daabacday sawirrio ashqaraar leh oo ku saabsan wasaqoowga aduunka.
3 Juunyo 2018
Hoggaamiyihii hore gobolka Catalonia oo soo magacaabay musharrax madaxweyne
Hoggaamiyihii hore ee gobolka Catalonia Carlos Puigdemont ayaa soo magacaabay nin siyaasadda ku cusub oo u tartami doono doorsahada madaxtinimo ee gobolkaasi.
Hoggaamiyaha gobolka Madrid ee dalka Spain ayaa xilka iska casishay kaddib markii lagu eedeeyay inay alaab ka xadday goob laga tukaamaysado.
Barcelona oo markii afraad ee xidhiidha qaaday Copa del Rey
Luis Suarez ayaa laba gool u dhaliyey kooxdiisa Barcelona oo u awood sheegatay Sevilla kuna guulaysatay koobka Copa del Rey markii afraad ee xidhiidh ah.
Maalin kaddib markii laga sii daayay xabsi ku yaalla Jarmalka, hoggaamiyihii hore ee Catalonia Carles Puigdemont, ayaa ugu baaqay Spain inay bilowdo wada hadal ku aaddan xal siyaasadeed oo loo helo xasaradda ka taagan Catalonia.
Hogaamiyihii Catalonia wali kama tanaasulin mowqifkii madaxbanaanida
Hogaamiyihii hore ee gobolka Catalonia Carles Puigdemont ayaa ugu baaqay taageerayaashiisa in ay sii wadaan halganka xilli uu wajahayo musaaafurin iyo in loo soo gacan galiyo xukuumadda Spain.
Muuusig baa lagu madadaaliyaa eyda booliska Madrid
Eyda booliska magaalada Madrid ee dalka Spain ayaa waxa loo samaynayaa adeeg gaar ah oo ay ka mid yihiin qaboojiyeyaal lagu rakibo meelaha lagu hayo iyo in muusig lagu nasiyo loo shido, si daryeelkooda loo hagaajiyo.
Spain : Wiil maqnaa in badan oo meydkiisa laga heley gaariga aayaadiis
Wiilyar oo baadi-doonkiisa ay ka qeygaleen kumanaan kun oo qof, muddo billooyina la raadinayay ayaa meydkiisa laga heley qeybta dambe ee gaariga islaan ay aabihiis wada joogaan.
Pep Guardiola oo aqbalay eedeymo loo soo jeediyay
Tababaraha kooxda Manchester City, Pep Guardiola ayaa aqbalay eedeyn ay usoo jeediyeen guddiga xiriirka kubadda cagta Britain ee FA, kaasi oo ahaa inuu ku kacay arrimo siyaasadeed, kadib markii Guardiola uu dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay uu xirnaa calaamad jaala ah, taasi oo muujineysa sida uu uga xunyahay qaabka dowladda Spain ay ula dhaqatay dadkii u ololeynayay madaxbanaanida gobolka Catalonia ee uu kasoo jeedo.
Arrintan ayaa keentay hadal heynta in Ronaldo in uu yahay nin xarago jecel, islamarkaasna jirkiisa naashnaasha.
Nin ka baxay albaabka diyaaradda ee xaaladda degdegga ah
Nin rakaab ah oo saarnaa diyaaradda Ryanair oo ku dhex daalay diyaaradd Spain taagan ayaa ka baxay albaabka loogu talogalay in laga dago marka ay xaalad degdeg ah jirto.
Ra'iisul Wasaraaha Spain ayaa sheegay in baarlamaanka cusub ee Catalan ay tahay inuu kalfadhigiisa ugu horreeya uu yeesho 17-ka bisha Janaayo, ka hor inta uusan awoodda u soo celin dowladda gobolkaasi.